5 ဒီဇင်ဘာလ 2017 Belz Sociedad 30
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုခွင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုမဟုတ်ရင်တိုင်ကြားကြဘူး ... ရှုတ်ချသည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးထိခိုက်နစ်နာ၏လူကြိုက်များဧရိယာစည်းကမ်း, ကြီးမားတဲ့အမှား, အပြင်ကတခြားအမျိုးအစားများတကာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ငြိစွန်းမှသက်ဆိုင်ရာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဂုဏ်သိက္ခာချိုးဖောက်အပေါင်းတို့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မေ့လျော့ရပ်ရွာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အပြစ်တင်နေသည်အတွက်နားလည်သဘောပေါက်သည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသို့မဟုတ် segment ဖြစ်စေ။
သည်အခြားရှိပါတယ် သိက္ခာမဲ့စကေးမှအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင်နိုင်ငံရေး ဒါသည်ciñiéndolaမှ အရွယ်မရောက်သေးသူ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကလေးများ့ pedophilia နှင့်ပင်ကို virtual အလေ့အကျင့်, အကြမ်းဖက်မှု, မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်တန်ဆာများ၏လူကုန်ကူးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်ပြစ်ဒဏ်များတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုရင်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသူ့ဟာသူတခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်သို့မဟုတ်အယှက်ရန်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်, အကောင့်ထဲသို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာ code တွေရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ယူသင့်ပါတယ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးဖို့ ballasted နိုင်ရည်ရွယ်ချက်များမုသာစကားကိုလျှောက်ထားမယ်လို့ တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်မိသားစု, ခိုးယူ, အာမခံချက်မရှိဘဲမည်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာအလွဲသုံးစားမှုကိုယ်ပိုင်မတရားမှုကိုလှဲ, plagiarism, ကျား, မအကြမ်းဖက်မှု, နှုတ်အလွဲသုံးစားမှု, ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အမှုအရာပြောင်းလဲပစ်ရန်လူများ၏ခြယ်လှယ်။ တိုတောင်းသောများတွင်အများဆုံးမကြာခဏတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဘို့သတိမမူသောအလားတူသက်တမ်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတွက်အပြစ်ပေးခံရဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်အရာအားလုံးကို, ငယျဆုံးသောဒီဂရီအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုပစ္စည်းအော်ဂဲနစ်ပြိုကွဲဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဥာဏ်ရည်သို့မဟုတ်သက်သေထိခိုက်စေသောတယောက်သည်, အစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကလူသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား၏အုပ်စုတစုကိုနှေးကွေးစေ။ ထိုသို့သောထူထောင်ခဲ့ကြတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောသဘောတူညီခဲ့ပြုမူသောအမှုယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ယိုယွင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုရှိကြောင်းပြသသည့်အခါတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်တာဝန်ခံကဆက်ပြောသည်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူအကျင့်ပျက်ခြစားမှု, သိသာသို့မဟုတ် simulated ရှိမရှိအများဆုံးခေါင်းပုံဖြတ်, အရာဖောက်ပြန်တဲ့, အကျင့်ယိုယွင်း, ဒုနှင့်လိုက်စားကျူးလွန်လာစေရန်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာလူများ၏အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားများအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်ပါသည် သုခချမ်းသာနှင့်လူမျိုး၏ယုံကြည်စိတ်ချမှု, အရည်အသွေးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဝတ်ပြုကြ၏။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု degradation တရားမျှတမှုနှင့်ယုံကြည်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ကို prevarication, လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုသို့မဟုတ်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ inexcusable ရလဒ်များကိုကိုဓားစာခံလုပ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး praxis လျှောက်ထားမည်ဟုသောအုပ်စုတစ်စု၏ဖြစ်ခြင်း၏ခြောဆိုင်းဘုတ်များသရုပ်ပြမြင်ကြရသောအခါ, တူညီတဲ့ဖြစ်သင့်ပါလျှင် ဥပဒေနှင့်အကိုက်ညီဘူး။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု view ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအချက်ကနေယုံကြည်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် vilify ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, စီစဉ်ထားလှဲသုံးစား, အများပြည်သူဘဏ္ဍာတိုက်, အကျိုးစီးပွားနှင့်လူမှုရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်သာလွန်၏ expropriation နှင့်လုယက်အပြင်ဘက်ရိတ်သိမ်းကြပြီကြောင်းဆန္ဒပြပွဲလူပေါင်းတင်လိုက်တယ်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့၏အခင်းအကျင်းအတွက်မဆိုအချက်မှာလူထုအခြေပြုပညတ်တရား၏ပြဌာန်းချက်ဆန့်ကျင်ခြင်း, စာရင်းကိုင်ကာလအခွန်အတွက်ဖိနှိပျ, လူမှုရေးလုံခြုံရေးရှောင်, မမျှတလုပ်ခလစာပေးချေ, ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Reptilian တစ်ဦး '' ကိုက် 'ဆိုတဲ့တားမြစ်ထားသစ်ပင်၏ပန်းသီးပေးအာဒံစုံစမျးဖို့ဧဝကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးကတည်းကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတည်ရှိခဲ့သည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတစ်မှတ်တိုင်တားဆီးသို့မဟုတ်ဝတ်ဖို့ကိုဘယ်လို ?. ဖြေဆိုပေမယ့်စကားလုံးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနေ့ရက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဘာသာရပ်အဖြစ်ပညာရေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့လုံလောက်, ယဉ်ကျေးမှုလက်နက်များအတွက်အခြေခံအစီအမံ interposing ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းစွာရည်ရွယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်သည်းခံခြင်းခဲ့ဟုဆိုလိုပေသည်ထားတဲ့ရန်ခက်ခဲ , စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, နားလည်မှုအပြည့်အများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောရှာဖွေတွေ့ရှိ, ငါတို့သည်အချို့သောဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့သက်သေအထောက်အထားကင်းမဲ့ပင်လျှင်, မျက်နှာပြင် inoculate နိုင်သောဒဏ်ရာပါဝငျသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ပျက်ပြား ..
တိုက်ခိုက်ရေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှု အကောင်းဆုံးလူသိများသူတွေထဲမှာကွဲပြားမှု, ပဋိပက္ခများနှင့်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှား, သွေးဆောင်မှုကိုမဆိုဖြစ်ပွားကိုင်တွယ်ရန်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ် qe ယန္တရားများကိုထိန်းချုပ်ဖို့တားဆီးမထားဘူးသောအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်တွေအများကြီးသို့မဟုတ် valladar လုပျနိုငျထင်ရှားထားကြသည် အစကတည်းကအနေရှိမရှိအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအတွက် running ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏အကျိုးဆက်များ အမိန့်, လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်လျြောအများစုအဓိကအားဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ, ပညာရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးကိုထိခိုက်စေသည်ဟုမြင့်တက်ဘတ်ဂျက်များဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အလုပ်, လုပ်ဖို့ကဆက်ပြောသည်ကြောင့်နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းသောမိတ်ကပ်ငွေပေးချေ၏မျက်နှာဖုံးအားဖြင့်အမျိုးသားရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်ပြင်းထန်။ နှင့်ဤသဘောမျိုးကျနော်တို့ကြော်ငြာခြင်းမှတဆင့် delude နိုငျသောလူ့အဖွဲ့အစည်းမှထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအရာမဆိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စီးပွားရေး, မှ extrapolate နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မကြာခဏဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဖြစ်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်အခွင့်အရေးများ၏ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေပြည်နယ်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်သောသက်ရှိရှိပါတယ်မေ့လျော့ TI Transparency Internationalဒါကြောင့်တစ်ဦးအကောင်အထည်ဖော်မှုမှကြွလာသောအခါ, အပြည့်အဝအရပ်ဘက်-Private Partnership, အဖြစ်သတိအစိုးရများကဖော်ထုတ်တစ်ခုကအဖွဲ့အစည်း, ပိုငျသညျအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် insistiencia အောင်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှငျ့နာခံမှုလိုဒီမိုကရေစီ appends ကိုးကား:
Transparency International (TI) ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ဖို့လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ခု universal စကေးပေါ်တွင်သာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖျက်သိမ်းရေးဘယ်အလုပ်ကိုမျှဖြစ်ပါသည်မဟုတ်သလိုတစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကမူလတန်းပညာရေးကြောင့်ကမီဒီယာ, အဖွဲ့အစည်းများ, ကျောင်းများနှင့်အထူးသဖြင့်မိဘများ၏အုပ်အပေါင်းတို့၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူ၏ဂုဏ်ပြု ဘဝသင်၏သားသမီးအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ထိခိုက်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတိုင်းတာမယ့်ဘေးမရှိဘဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်သင့်ကြောင်းအဆိုပါအခြေခံမူများ၏လက်တွေ့ဘဝကိုဂုဏျတငျဖို့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအသုံးပြုဖို့သူအသမာဓိလူများ, ဖြစ်သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမည်လမ်းကိုပြသရပါမည်။
Catalunya အတွက် 21 2017 ဒီဇင်ဘာလနှစ်သစ်ကူး! ပြီးတော့ .. ဖြစ်ကောင်းသေး "ဗက်လင်မြို့" compose မဟုတ်ပါဘူး။
ပီ Moller Davidsen သူ says:
6 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 08: 46
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာဝန် ... ကျွန်တော်ပိုကောင်း guillotine အများပြည်သူသောအရပ်တို့ကိုမရ ..
Jazmin MV သူ says:
12 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 21: 00
တိုင်းပြည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်နှင့်အများပြည်သူအင်အားကြီး၏ဥပဒေနှင့်လွတ်လပ်ရေး၏အုပျခြုပျလေးစားသောအခါ, ထိုကဲ့သို့သောကျူးဘားကျွန်းနှင့် "မြောက်ကိုရီးယား" ၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါအဘယျသို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Deyan ကောင်း သူ says:
14 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 06: 29
ဗင်နီဇွဲလား GALOPA မေး DA funk ထဲမှာ
ဧလိယစစ် သူ says:
15 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 00: 34
အစစ်အမှန်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာသူ့ရဲ့လူတွေတို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့် massacres သောပြည်နယ်၏လက်မှလာလျှင်သင်အစိုးရကဘာကိုမျှော်လင့်သလဲ?
Rodolfo ဟာနန်ဒက်ဇ် သူ says:
15 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 00: 34
Pedro Beja အဘိဓါန် သူ says:
15 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 02: 08
အဲလ်ဆာဘင်နီတက်ဇ် Caballero သူ says:
19 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 23: 20
သင်ကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပထမဆုံး justicia.es ကို run ရန်ရှိသည်
ဂျက် သူ says:
19 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 14: 30
ငါကမှာအကောငျးဆုံး hes wаger!? Larry ကရယ်တယ်။
13 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 04: 20
14 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 13: 46
15 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 00: 35
Moller ပီ Davidsen သူ says:
15 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 06: 51
16 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 11: 57
ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါဖြစ်ကြသည်။ ရုံကမ္ဘာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါက So.
17 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 03: 23
စပီကာထဲကအတော်များများ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု (FIRST, သူခိုးရေစူးပါ) ..
18 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 22: 52
22 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 21: 12
စစ်တပ်ရှိရာငါကောင်းစွာ .disq ရာထူးကြက်ဥရှိသူတို့တိုင်းပြည်ပုပ်အကူအညီနဲ့ဖြစ်ပါသည်, .Estánလုယက်မှုများ, အစိုးရအဖွဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီရူး၏စည်းစိမ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေကိုခုခံကာကွယ်မည်, စဉျးစားမိ။ သို့မဟုတ်အားလုံးကိုကြက်ဖြစ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
5 မှ 2018 မေလ 20: 16
ဗင်နီဇွဲလား Reeducate, Creole အဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်လွှလူ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိ
5 မှ 2018 မေလ 20: 59
6 မှ 2018 မေလ 00: 55
6 မှ 2018 မေလ 11: 19
ဒါကြောင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည့်အခါအလံဃချားဗေ့စ်ကြီးနှင့်ဤပိုပြီးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုက q q ဃ lis စတုတ္ထတစ်ထောင် Times သတင်းစာများမှာ
6 မှ 2018 မေလ 16: 23
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါ ... ကြောင်းစိတ်ဆင်းရဲအမှိုက် propagandita တိုင်ကြားခဲ့ပါဘူး။
7 မှ 2018 မေလ 18: 26
ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါဆိုသညျကားအဘယျသို့င်လျှင်, လမ်းများသို့ထွက် သွား. , သူအပေါငျးတို့အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, type ကိုတောင်သူလယ်သမားကင်းလှည့်ဖမ်းပြီးခိုးယူခဲ့ရာ devuevan သော latigasos, နှင့်ပညာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ငွေဖမ်းပြီး။
7 မှ 2018 မေလ 23: 07
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးနေသေးတယ်နေချိန်မှာအစဉ်မပြတ်ငါဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချနိုင်အောင်လုပ်ငန်းစဉ်အလျင်စလိုမဆိုအရာရှိတဦးကိုအားသွင်းဖို့ဆန္ဒရှိရှိလိမ့်မည် ... အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစေသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဗျူရိုကရေစီလုပျထုံးလုပျနညျးထင်
9 မှ 2018 မေလ 09: 52
အဘယ်ကြောင့်နေအိမ်စွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ 20 မေလတစ်ရက်အမျိုးသားရေးသပိတ်မဲပေးရန်နှင့်မထောက်ခံ
9 မှ 2018 မေလ 20: 47
ငါတို့ဗိမာန် COMBATIRLAA စတင်ထိုအရပ်၌မေး
10 မှ 2018 မေလ 18: 45
မေး ay မဲပေးမဟုတ်ပါဘူး။ လည်း nojoda ဒေါသပေးထားသောဘာက q q ကိုသိရသညျအလငျးကိုဖယ်ရှားဘုရားသခငျသညျထိုနေ့ရက်က q ဆုတောင်းပဌနာ
11 မှ 2018 မေလ 00: 14
တရားရုံးချုပ် rednecks အားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲကြောင့်ဆက်ဆက်အများကြီး, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ဘာမျှမလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်။ ပြောင်းလဲမှုအတွက်အမှုနှုန်းကဒီ 20 မေလ ... .... နောက်ဆုံးအချိန်အားဖြင့် Danielo Anderson တို့သေဆုံးခဲ့ပြီးကတည်းကအစိုးရကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအားလုံးသည်စွပ်စွဲချက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကခြိမ်းခြောက်မှုမ, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက် .. အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းမကြားပြီ comptroller များအတွက်တရားရုံးချုပ်သို့မဟုတ် Ombudsman အတူတူပင်လူများကဿဟာယပျက်နေကြ ကြောင်း ...
11 မှ 2018 မေလ 00: 42
အလယျပိုငျး orita porq အချိန်မျှအဖွဲ့အစည်းများက q ... သင်ကစိုစွတ်သောလက်အားရနှင့်ထို့နောက်သုံးဆရောင်းစားသောပေမယ့်တာဝန်ခံဃဖြစ်ပါတယ်တဖန်သင်တို့သင်သည်သင်၏ oq ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်ထင်လျှင် .. သင်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးဒီတော့ q ငါက q command ကိုဤကစွန့်ခွာမဲပေးdဖြစ်ပါတယ် listen မက်ဆေ့ခ်ျကို ..
11 မှ 2018 မေလ 09: 01
ငါ MY OPINIO ထားခဲ့ပါ ... သောအရှက်ကွဲနိုငျငံ၏ပုခက်သည်အဘယ်ကြောင့် MANDAN ထိုင်ခုံနေရာဖြုတ်ပစ် WHO ကအဲဒီမှာရမယ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအဆုံး ..
YurPortal.Info သူ says:
13 မှ 2018 မေလ 07: 45
Лидеромбытовойкоррупцииявляетсямедицинскаяотрасль။ Иэтосвязаностем, чтовмедицинскиеучреждениялюдиобращаютсячащевсего, анепотому, чтоэтиучреждениякакие-тоособенные။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတဖန် လာ. ဘယ်လောက်ဆိုး, ဒီartículoTweetArgentina Share! ဘယ်လိုစပိန်ရဲ့စီးပွားရေး, ကောင်းကင်ဘုံ? .. ပြီးတော့ငရဲ၏ "အလေးချိန်" ဟုကြောင့်အာဂျင်တီးနားအတွက်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကောင်း, မဟုတျပါဘူး [ ... ]
23 မတ်လ 2019 0
Comparte este artículoTweet El esfuerzo de hacerse entender por aquellos que pretenden no oír ni tan siquiera las voces sonoras de la desesperación y las “soluciones” queatítulo personal tanto reclamaban en su apología [ ... ]